स्वचालित9a-91 - रूस को कानून प्रवर्तन शरीर को विशेष एकाइहरूको मनपर्ने हतियार। विकास पनि लाइसेन्स रूपमा नागरिकहरु द्वारा संचालित छ आत्म-सुरक्षाको माध्यम। व्यापक मिसिन सानो आकार र उच्च लड गुणहरू कारण थियो। थप उन्नत मोडेल को एउटा ठूलो को उपस्थिति भए तापनि मोडेल यस दिन सफलतापूर्वक प्रयोग गर्न जारी छ।
9 a-91 स्वचालित फोटो, यो सामाग्री मा प्रस्तुत छ, जो, निम्न सामरिक र प्राविधिक मापदण्डहरू द्वारा विशेषता:
हतियार लम्बाइ - 600 मिमी गर्दा unfolded बट र एक जोडेको, stowed स्थिति 380 मिमी;
बैरल लम्बाइ - 160 मिमी;
चौडाई - 45 मिमी;
वजन - 2.1 किलो (स्टोरमा कारतूस बिना);
कैलिबर - 9x39 मिमी;
फायर दर - प्रति मिनेट 700 800 राउंड्स देखि;
क्षमता पत्रिका - 20 राउंड्स।
9 a-91 मोडेल - मिसिन को propellant brainstem च्यानलबाट निकास ग्याँसहरु हटाउन को सिद्धान्त मा संचालित छ। ताला lugs मा शटर4को परिक्रमा मार्फत गरिन्छ। एक हथौडा योजना को गोलीबारी संयन्त्र उपस्थिति तपाईं एकल श्रृंखला आगो र लक्ष्य लगातार bursts हिट गर्न अनुमति दिन्छ।
फारम दोभासे मा सुरक्षा यन्त्र रिसीभर को बायाँ तर्फ मा, ट्रिगर गार्ड माथि प्रबन्ध छ। 1995 मा बाहिर थिए जो स्तरवृद्धि संस्करण, को फ्यूज दाँया मा माउन्ट छ। निर्माता को बायाँ तर्फ अप्टिकल sighting उपकरणहरू रोपण लागि पट्टी राख्न थाले। प्रारम्भिक नमूनाहरू समावेश गर्ने थूथन ब्रेक। तथापि, पछि उहाँले आवेदन इन्कार गर्ने निर्णय गरे।
9 a-91 (स्वचालित) upwardly retracts जो एक तह स्टक, comprises, र त्यसपछि अगाडि दिशा मा उत्प्रेरित गर्छ। अन्य विवरण को रूप मा, ह्यान्डल पेस्तोल, प्लास्टिक बनेको बाहेक, शेयर प्रभाव प्रतिरोधी इस्पात बनेको छ।
को जोडेको स्थितिमा9a-91 आफ्नो लुगा अन्तर्गत लुकाइन् लैजाने लागि अत्यन्तै सुविधाजनक बन्नेछ। एक नमूना को सहज यातायात को लागि एक तह सटर ह्यान्डल संग सुसज्जित छ।
सुसज्जित हतियार-भेदी बारूद 9mm संग स्वचालित9a-91 विशेष दिइएको नमूना लागि डिजाइन। वैकल्पिक रूपमा, सस्ती कारतूस 6-गेज लागू हुन्छ। उत्तरार्द्ध PPE तेस्रो वर्ग मा तैयार गर्ने शत्रु, को प्रभावकारी विनाश प्रदान गर्नुहोस्। automaton आघात शक्ति 100 मिटर दूरी मा 8 मिमी को एक मोटाई संग इस्पात पाना को प्रवेश लागि पर्याप्त।
एक समयमा एमए-91 को ब्रान्ड नाम अन्तर्गत उत्पादन भएको थियो जो, मेशिन को निर्यात संस्करण डिजाइन गरिएको थियो। मुख्य भिन्नता नयाँ विरोधी-हतियार बारूद 5,45 × 39 मिमी को आवेदन, 7,62 × 39 मिमी र 5.56 × 45 मिमी गरे। तर, नमूना मा एक महत्वपूर्ण माग अवलोकन थियो। तसर्थ, चाँडै पर्याप्त यसलाई श्रृंखला उत्पादन गर्न परिमार्जनहरू हटाउन निर्णय भएको थियो।
9 a-91 - मौन sniper राइफल VSK-94 ब्रान्ड को विकास को लागि प्रोटोटाइप भयो कि एक मिसिन। एक मफलर लागू गर्न उत्तरार्द्ध अलग दूरबीन ठाँउहरु लागि स्टक skeletal योजना उपस्थिति कार्यात्मक mountings तह र।
नमूनाको सञ्चालन समयमा हटाउन सकिने रवशामक प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। सुरुमा, विकासकर्तालाई ग्रेनेड लन्चर जीपी-95 को एक श्रृंखला सेट गर्ने क्षमता समावेश। तथापि, पछि विशेष परीक्षण निर्माता मिसिन पर्याप्त छैन बलियो र यी उद्देश्यका लागि पनि सजिलो बाहिर गरिएका भएकोले यस्तो कन्फिगरेसन त्याग्न निर्णय गरे।
वास्तविक workhorse कार्य एक मिसिन - यो अपेक्षाकृत शालीन आकार, मोडेल9a-91 बावजुद। नमूना यो एक सुव्यवस्थित आकार छ, एक धेरै संकुचित छ।
व्यापक लुकाइन् लैजाने लागि घरेलू प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग गरिन्छ गत शताब्दीको मोडेल को 90 को दशक मा, बुद्धि एजेन्सीहरू घर र कार भएका सशस्त्र समूहहरू कब्जा र काउन्टरको गर्न प्रयोग भएको थियो।
कारण वस्त्र, एक कब्जा काँध को भित्री खल्ती मा कम वजन र सुविधाजनक स्थानान्तरण बेल्ट लागि आवास9a-91 (स्वचालित) को भद्र मोटाई, गर्न। जोडेको गर्दा, स्टक नमूना आकार वृद्धि गर्दैन। मिसिन सजिलै stowed स्थिति को फायर राज्य ल्याए र फिर्ता जोडेको गर्न सकिन्छ।
मोडेल उच्चतम विश्वसनीयता छ। प्रभावकारी शूटिंग हतियार दूषण को डिग्री बिना बाहिर गर्न सकिन्छ।
आयात बढी उन्नत सानो आकारको मिसिन को उपलब्धता भए तापनि9a-91 अझै पनि रूसी आंतरिक मंत्रालय सेना र आन्तरिक सेना को विशेष एकाइहरु सेवा छ। यसबाहेक, मोडेल सक्रिय बेलारुस र मङ्गोलिया को राज्य सशस्त्र सेना को विशेष एकाइहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ, यदि आवश्यक, बाहिर वस्तुहरु जफत र hostages मुक्त गर्न सञ्चालन बोक्न।
Snowboard जूता - मात्र फैशन
GAZ-52। सोभियत ओटोमोबाइल उद्योग साँच्चै गर्व हुन केहि छ!
विश्वव्यापी वजन पीठ: वर्णन, सुविधाहरू, दृश्य र समीक्षा
कसरी राजधानी पत्र लेख्ने एक बच्चा सिकाउन? जहाँ सुरु गर्न? शिक्षण विधिहरू
माउस-बच्चा: तस्बिर र वर्णन
बवासीर लागि पोषण
आफ्नो हातमा एक दुर्दम्य ठोस कसरी बनाउने?
स्टाइल - यो के हो? स्टाइल बाल: समीक्षा